10 संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु
ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा पोल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
पर्यटकहरूको भीडबाट टाढा लुकेको छ, यी 10 संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरू, साँच्चै प्रेरणादायक छन्. यी रंगीन गन्तव्यहरूमा कलाकार र लेखकहरूले प्रेरणा पाएका छन्. त्यसैले, कथाहरू सत्य हुन्छन्, र यी मध्ये कुनै पनि ठाउँको भ्रमण पक्कै पनि तपाईंको लागि जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव हुनेछ.
1. संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु: Cinque Terre, इटाली
ग्रे जाडो दिन वा नीलो स्काईड गर्मी दिन, Cinque Terre कुनै पनि मौसम मा रंगीन छ. सुन्दर घरहरू नीलो समुद्रको दृश्य छन् र सबैभन्दा रंगीन चित्र सिर्जना गर्नुहोस्. यसबाहेक, तपाईंले Cinque Terre मा भ्रमण गर्नुहुने प्रत्येक गाउँ अन्य भन्दा बढी रंगीन छ, पहेँलो रंग को घरहरु संग, गुलाबी, रातो, र सुन्तला टोन.
त्यसैले, नीलो समुद्र र हरियो पहाड संगै, इटाली मा Cinque Terre क्षेत्र संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु मध्ये एक हो. यो रंगीन यात्रा वास्तवमा ला स्पेजिया शहरमा सुरु हुन्छ, एक महान बन्दरगाह शहर र Cinque Terre ट्रेन को प्रस्थान बिन्दु. Cinque Terre को आसपास रेल द्वारा यात्रा रेल गाँउहरु मध्ये प्रत्येक को लागी उत्तम छ, त्यसैले तपाइँ जान सक्नुहुन्छ र कुनै पनी ठाउँ मा फर्कन सक्नुहुन्छ जब तपाइँ दिन को समयमा चाहानुहुन्छ.
2. ट्यूलिप क्षेत्रहरु, नेदरल्यान्ड्स
गुलाबी, सेतो, सुन्तला, बैजनी, हल्याण्ड को ट्यूलिप क्षेत्रहरु इंद्रधनुष को सबै रंग मा जादुई छन्. सबै भन्दा राम्रो ठाउँ को लागी अद्भुत ट्यूलिप क्षेत्रहरु Keukenhof मा छ र तपाइँ सित्तैमा सुन्दरताको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ. अद्भुत क्षेत्रहरु Keukenhof बाट पन्ध्र मिनेट को पैदल दूरी मा छन्. तथापि, साँच्चै दुर्लभ सौन्दर्य अझै पन्ध्र मिनेटको लागि अझ सुन्दर ट्यूलिपहरूमा जारी रहन्छ.
तपाइँ अप्रिल देखि मध्य मे को बीच यो रंगीन दृश्य को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ, ट्यूलिप को समयमा’ फूल. ठूलो ट्यूलिप क्षेत्रहरु एम्स्टर्डम बाट एक छोटो यात्रा हो, त्यसैले यो एक अद्भुत हुनेछ दिन यात्रा नेदरल्याण्ड्स को लागी’ देहात. साथै, तपाइँ लुकाउने फूलहरु को प्रशंसा गर्न को लागी स्थानीयहरु जस्तै एक साइकल भाडामा लिन सक्नुहुन्छ.
3. संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु: Menton Cote D'Azur, फ्रान्स
सुन्दर फ्रान्सेली रिभिएरा तटहरूमा, तर मोन्टे कार्लो मा paparazzi बाट टाढा, Menton एक आश्चर्यजनक जीवन्त तटीय शहर हो. बेले इपोक पेस्टल घरहरू, यस काल्पनिक गाउँको सुन्दरतामा थप्नुहोस् र प्रत्येक पहिलो पटक आगन्तुकहरूलाई मंत्रमुग्ध गर्नुहोस्.
तपाइँ फ्रान्स वा इटाली को कुनै पनि बिन्दु बाट Menton को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो इटालियन सीमा को धेरै नजिक छ. Cote D'Azur फ्रान्स मा एक भव्य क्षेत्र हो र आराम गन्तव्य को लागी एक महान गन्तव्य को लागी बनाउँछ. त्यसैले, रंगीन शहर को पृष्ठभूमि मा महान तस्वीरहरु बनाउन को लागी, एक क्रूज मा जाँदै Menton मा एक अद्भुत छुट्टी बिताउन को लागी उत्कृष्ट तरिका हो.
4. पेलौरिन्हो, साल्भाडोर
शहर भित्र शहर शीर्षक, को पुरानो शहर केन्द्र साल्भाडोरको पेलोरिन्हो संसारको सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरू मध्ये एक हो. दास लिलामी को लागी एक पटक स्थान आज साल्भाडोर मा सबैभन्दा रंगीन र जीवन्त ठाउँ हो. यस क्षेत्रले औपनिवेशिक भवनहरूको रंगीन अनुहारहरू समेट्छ र कलाकारहरूको घर हो, संगीतकार, र महान नाइटलाइफ.
यसबाहेक, रंगीन Pelourinho एक बहुसांस्कृतिक केन्द्र हो जहाँ तपाइँ ब्राजील र अफ्रिकी विरासत को बारे मा जान्न सक्नुहुन्छ. को उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट Pelo मा दुबै व्यञ्जनहरु बाट उत्कृष्ट व्यंजनहरु प्रदान गर्दछ. त्यसैले, पछि तपाइँ वरपर धेरै हस्तनिर्मित पसलहरुमा स्मृति चिन्ह को लागी किनमेल समाप्त, तपाईं स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ सुन्दर खाना अफ्रिकी र ब्राजिलियन व्यञ्जनहरूबाट.
5. संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु: व्रोक्ला, पोल्याण्ड
पश्चिमी पोल्याण्ड मा सबैभन्दा ठूलो शहर, व्रोक्ला पोल्याण्डको लुकेका रत्नहरू मध्ये एक हो. Wroclaw एक आकर्षक छ अफ-द-पिट-पथ गन्तव्य यूरोपमा, र यसको रंगीन वास्तुकलाले यसलाई एक बनाउँछ सुन्दर शहर यूरोपमा. मध्ययुगीन बजार वर्ग मा सबैभन्दा रंगीन ठाउँ, जहाँ तपाइँ वरपर रेस्टुरेन्ट मध्ये एक मा जीवन्त वातावरण मा लिन सक्नुहुन्छ.
त्यसैले, रंगीन गल्लीहरू र पुरानो शहरमा घुम्नको लागि आफ्नो क्यामेरा र राम्रो हिड्ने जुत्ताहरू समात्न निश्चित हुनुहोस्. जाडोदेखि गर्मी सम्म, रंगीन व्रोक्लाले तपाईंलाई न्यानो स्वागतका साथ स्वागत गर्नेछ, र पोलिश pierogi आलु संग भरिएको, पनीर, वा फल.
6. Burano द्वीप, इटाली
भेनिस नजिकै तीन प्रसिद्ध टापुहरु मध्ये एक, Burano तीन प्यारा इटालियन टापुहरु को बीच रंगीन एक हो. एक डुङ्गा यात्रा मुख्य भूमिबाट टाढा, बुरानोको उज्यालो-पेन्टेड घरहरू उत्कृष्ट छन् अफ-सिजन छुट्टी गन्तव्य. जब तपाइँ टापु को चारैतिर घेर्न सक्नुहुन्छ2घण्टा, तपाईंले पूरा दिन बिताउनुहुनेछ, केवल तस्बिर खिच्दै.
पुलको छेउमा रहेका मनमोहक माछा मार्ने घरहरू र धेरै नहरहरूले बुरानोको सौन्दर्य थप्छन्. यो शीर्ष मध्ये एक को पोस्टकार्ड जस्तै छवि मा जोड्दछ5युरोप मा रंगीन ठाउँहरु. Burano को एक यात्रा भेनिस बाट एक महान दिन यात्रा हो, फीता किनमेल र भेनेशियन लैगून को दृश्य संग Aperol दोपहर पेय को लागी महान.
7. संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु: Nyhavn, कोपेनहेगन
रमणीय बन्दरगाहले एक पटक सबैभन्दा ठूलो बाल पुस्तक लेखकहरूलाई राजकुमारी र मटर लेख्न प्रेरित गर्‍यो।. हो, होईन. 20 टाउनहाउस एक पटक डेनिस हान्स क्रिश्चियन एन्डरसनको घर थियो. रंगीन Nyhavn एक जीवन्त केन्द्रीय बन्दरगाह थियो, जहाँ तपाईं नाविकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ’ लगभग कुनै पनि भाषामा कल.
आज, पुनर्निर्मित Nyhavn जहाँ स्थानीयहरू दिनको अन्त्यमा आराम गर्न आउँछन्. ज्याज संगीत संग डिनर, डुङ्गा र रंगीन टाउनहाउसहरूमा सूर्यास्त हेर्दै, उल्लेखनीय अनुभव छ.
8. गुटापे, कोलम्बिया
ढोका संग, पर्खाल, र छतहरू विभिन्न रंगहरूमा छन्, Guatape शहर कोलम्बिया मा सबै भन्दा रंगीन शहर हो. यो रंगीन सहर कोलम्बियाको एउटा रिसोर्ट टाउन हो, आश्चर्यजनक दृश्य र पहाडहरूको साथ. त्यसैले, एक लागि अचम्मको दृश्य सम्पूर्ण शहर र यसको रंगहरु, तपाईं La Piedra del Penon मा चढ्न सक्नुहुन्छ, र शीर्ष मा 740 पाइला टेक्दा संसारको सबैभन्दा रंगीन ठाउँको अद्भुत दृश्य तपाईलाई खुल्छ.
तथापि, शहरको उज्यालो भागहरू Zocalos मा छन्, घरहरूको तल्लो भागहरू. Zocalos हातले चित्रित सजावट हो, केही जनावर वा फूल चित्रहरू, र अरूहरू केवल रंगीन सजावट हुन्. निष्कर्षमा पुग्न गर्न, कम्तिमा दुई दिनको योजना बनाउनुहोस्’ Guatape को यात्रा त्यसैले तपाईं संसारको सबैभन्दा उज्यालो र सबैभन्दा रंगीन सडकहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ.
9. संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु: कोल्मार, फ्रान्स
रंगीन आधा-काठ घरहरू, फूलले सजाइएको नहरहरू, Colmar एक शानदार फ्रान्सेली शहर हो जहाँ परी कथाहरू जीवनमा आउँछन्. सुन्दर नहरहरूले तपाईंलाई आकर्षक गल्लीहरू मार्फत खुला वर्गहरूमा लैजान्छ. यहाँ, माछा मार्नेहरू बसेर दिनभरका रोमाञ्चक र समुद्रका कथाहरू बताउँथे.
तपाईं स्विट्जरल्याण्डको बासेल वा फ्रान्सको कुनै पनि प्रमुख शहरबाट कोलमार जान सक्नुहुन्छ, रेल बाट. त्यसैले, तपाईंको युरोपेली छुट्टी यात्रा कार्यक्रममा Colmar को भ्रमण तल राख्नुहोस्. अर्को उत्कृष्ट विकल्प भनेको तपाईको सम्पूर्ण बिदा कोलमारमा मात्र खर्च गर्नु हो. या त बाटो, कोलमारमा फ्रान्सको सबैभन्दा रंगीन ठाउँको तस्बिर खिच्न बाहेक धेरै कुराहरू छन्. उदाहरणका लागि, नहर यात्रा, कभर बजारमा किनमेल, र Alsace वाइन स्वाद.
पेरिस देखि कोलमार ट्रेन संग
ज्यूरिख देखि Colmar एक ट्रेन संग
Stuttgart देखि Colmar एक ट्रेन संग
10. शेफचौएन, मोरक्को
हरियो उपत्यकामा लुकेको छ, बस2Tangier देखि घण्टा, सबैभन्दा नीलो र बहुमूल्य रत्न Chefchaouen हो. निलो र सेतो मा चित्रित, रंगीन सजावट संग, Chefchaouen मोरक्को मा सबै भन्दा उज्यालो ठाउँ हो. ग्रीक टापु Santorini जस्तै, विचित्र सडक र वास्तुकलाले सबैभन्दा गम्भीर यात्रीलाई मोहित बनाउँछ.
किंवदन्तीहरू भन्छन् कि अद्वितीय रङ छनौट 15 औं शताब्दीको हो जब यहूदी मानिसहरू यस सानो शहरमा बस्थे।. त्यसैले, निलो रङले आकाश र ईश्वरसँगको सम्बन्धलाई जनाउँछ. जबकि यहूदीहरू अब यो सानो सहरका बासिन्दा छैनन्, यद्यपि यो ठाउँले वर्षौंसम्म यसको सौन्दर्य सुरक्षित राख्यो. आज, यो सानो सहरले हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ, त्यसैले हरेक नीलो कुना वरिपरि उत्साहित भीडहरू भेट्न तयार हुनुहोस्.
हामी मा एक ट्रेन सेव तपाइँ को लागी एक यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 10 संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोस्ट "विश्वका १० सबैभन्दा रंगीन स्थानहरू" तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fmost-colorful-places-world%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
रंगीन ColorfulCities ColorfulPlaces ColorfulTowns Mostcolorfulcitiesineurope mostcolorfulplacesworldwide